प्यारो मान्छे तिमीलाई जन्मदिनको शुभकामना | मझेरी डट कम
त्यो परिचय त्यतिमै सीमित रह्यो म अध्यक्ष, तिमी उपाध्यक्ष अनि अरु साथीहरू अरु अरु पदमा । चलि नै रह्यो यात्राहरू आफ्नै गतिमा, आफ्नै रफ्तारमा । जति जति समय अघि बढ्दै गए परिस्थितिहरू फरक हुँदै गए । हुन त पहिले पनि परिस्थितिहरू आफ्नो अनुकुल त कहाँ पो थिए र ? जब एस.एल.सी.परीक्षा नजिकिन थाल्यो टिउसन पढ्नको लागि भुरिगाउँ जानु पर्ने । घरदेखि ४ किलोमीटरको दुरी । अहो निकै गाह्रो लाग्थ्यो त्यो चार किलोमीटरको यात्रा पनी, अँझै त्यसमा पनि सदरमुकाम रोड भए पनि कच्ची बाटो, माघ–फाल्गुणको महिना त्यसै त धुलाम्मे सडक झनै हावाको वेग सँगसँगै उडिदिन्थे ती धुलोहरू पनि ।
घरबाट धुलाम्मे सडकको केही दुरी (झण्डै २ किलोमीटर) पार गरेपछि भुरिगाउँ पुग्नका लागि दुई वटा बाटो छुट्टीन्थे एउटा बाटो त्यही धुलाम्मे सडकको निरन्तरता थियो, अर्को केही नयाँ धुलाम्मे सडक अनि त्यस पछिको २ किलोमीटरको पिचबाटो, अहो पिचबाटो भनिसकेपछि कसलाई पो रहर लाग्दैनथ्यो होला हिँड्न रु केही क्षण पिचबाटो हिँड्न पाइने अपेक्षाले दुरी लामो परे पनि प्राय जसो म त्यही बाटो हिँड्ने गर्थे । खासै साथीहरू पनि कोही थिएनन बस एक्लो यात्रा हुन्थ्यो । आफ्नै सुरमा ।
टिउसन गयो पढ्यो फर्कियो, दैनिकी यही हुन्थ्यो । मलाई ती विगतका क्षणहरू त्यति स्पष्ट सम्झना छैन कि कहिले हो म दिन भन्न सक्दिन । तर टिउसन जाने आउने देैनिकी कार्यकै बीच कुनै दिन तिमीलाई त्यही बाटोमा फेरि देखेको हुँ । सायद त्यो बाटोमा पहिले पनि देखेको थिएँ होला तिमीलाई, तर नचिन्दासम्म यहाँ कसले कसको पो मतलब राख्छ र रु र फेरि अर्को पटकको देखाई पछि थाहा भयो कि त्यो बाटो जुन बाटो म एकै छिन भए पनि पिचमा हिड्ने अपेक्षाले हिँड्ने गर्थे तिम्रो घरको अगाडिबाटै जाने रहेछ र कैयौँ पटक म तिम्रो समिपबाटै गएको रहेछु । अहँ कुनै बेचैनी थिएन पहिले त्यही बाटो हिँडिरहँदा तर जब तिम्रो घर यहीँ पर्छ भन्ने थाहा भयो अनि हुन थाल्यो छुट्टै अनुभव त्यही बाटो हिँड्दा । तिमीलाई देख्न लालच गर्न थाले आँखाले पनी, साविकभन्दा अलि बेसी धड्किदिन थाल्यो धड्कन पनि त्यो बाटो हिँडिरहँदा, मस्तिष्कले पनि केही फरक सोँच्न थाल्यो, मनले केही अनुभव गर्न थाल्यो र त म आफू, आफैभन्दा केही बेसी लाग्न थाल्यो । खै के के हो के के सोँच्छ यो मनले पनि ।
दिनहरू वित्दै गए, परिस्थितिहरू फरक बन्दै गए । एस।एल।सी। परीक्षा पनि सकियो, र सकियो एउटा अवस्था । त्यो बेलाको उमेर पनि त त्यस्तै थियो । परीक्षा सकिएसँगै म कहीं कतै गएँ । हरेक पलमा तिमीलाई देख्न चाहनु आर्कषण थियो जुन आकर्षण सकियो त्यो दुरीले । म आफ्नै यात्रामा तिमी तिम्रै यात्रामा । समय अघि बढिरहेको थियो तिम्रो पनि एस.एल.सी. सकिएछ । केही समय पछि खबर आयो तिमी नेपालगञ्ज पढ्न थाल्यौ । यसै बीचमा हामी फेसबुकमा जोडिएका थियौ । कहिलेकाहींको बोलचाल बाहेक खासै केही हुँदैन थियो । म अँझै पनि सम्झिन्छु त्यो दिन जति बेला आफ्नै आफ्नै यात्रामा हिँडेको केही समय पछि नेपालगञ्ज हस्पिटल रोडमा देखेको थिएँ तिमीलाई । म पढ्ने क्याम्पस क्षेत्रीय रंगशाला नजिक थियो (नेपालगञ्ज टेक्निकल कलेज) अनि तिमी पढ्ने त खै थाहा नै कहाँ थियो र ? देखियो फेरि आफ्नै दिनचर्यामा हिँडियो, केही त्यस्तो थिएन । केही समय पछि फेरि बागेश्वरी मन्दिर नजिक देखियौ तिमी, मनमा केही हलचल भयो । आफ्नै गाउँठाउँको त्यो पनि एउटै समूहमा रहेर काम गरेका हामी केही आत्मीय अनुभव भयो । बजार जाँदा आउँदा फेरि फेरी पनि देखिरहने आश हुन थाल्यो । तर हुन्छ कहाँ त्यस्तो, जस्तो हामी सोँच्छौं ।
एक, दुई हुँदै महिनौँ बिते तर फेरि त्यसै गरी नेपालगञ्जमा देखिन तिमीलाई । साप्ताहिक बिदामा घर आउन टाढा पर्ने हुँदा दिदीको घर खजुरा जाने आउने हुन्थ्यो । त्यसै क्रममा फेरि एक पटक देखियौ तिमी खजुरा रोडको कुनै घरको बार्दलीमा । त्यसको केही समय पछि थाहा भयो नेपालगञ्ज फुपूको घरमा बसेर पढ्दै रहिछौ तिमी र मैले अर्को पटक तिमीलाई देखेको घर/स्थान तिम्रो फुपूको घर रहेछ ।
यो समयमा तिमीसँग सामाजिक संजालमा कहिलेकाहीं कुराकानी हुन थालेको थियो । कुनै दिन तिमीले फेसबुकमा आई।डी। प्रमाणित गर्नका लागि मोबाईल नम्बर हालेकी थियौ निकै थोरै समय मात्र लगत्तै नदेखिने बनाएर । एउटा संयोग भनौँ, त्यही बेला नै हो मैले तिम्रो मोबाईल नम्बर पाएको र त्यस पछिका केही समय ९झण्डै एक वर्ष० हरेक दिन जसो कुराकानी हुन्थ्यो, हरेक क्षण सन्देश आदान प्रदान हुन्थ्यो, प्रगाढ आत्मीयता बढेको थियो । समय बितिरह्यो । भौगोलिक रुपमा केही दुरी भए पनि हामी बीचमा, मनको दुरीमा भने निकै नजिक थियौँ हामी ।
जिन्दगी भोग्दै गर्दा, जिन्दगी जिउदै गर्दा अनुभवहरू अनेकन हुँदै जान्छन । यात्रा बीच गोरेटोहरुमा थुप्रै यात्रीहरू भेटिदै जान्छन र छुट्टिदै जान्छन । सुनेको थिएँ यात्रामा कोही एक्लो हुदैन भनेर र हो पनि यात्रामा कोही एक्लो हुँदैन, केही समयका लागि कोही भेटिन्छ अनि अलि पर पुगेपछि छुटिन्छ, यस्तै भइरहन्छ । भेटिएका सबैसँग बोल्नै पर्छ र बोलिन्छ भन्ने पनि छैन तर कोही हुन्छन जससँग थाहै नपाएर मन साट्न पुगिंदो रहेछ । हो यस्तै केही भएको छ मेरो यात्रामा पनि ।
यो दोबाटोहरू कहिल्यै एक आपसमा मिलन हुन सक्दैनन् र सक्दैनन कोही कसैलाई मिलाउन पनि । हुन त यो गोरटो अनि चौताराहरुको के दोष ? कोही भेटिनु र छुट्टिनुसँग । म पनि के के हो के के भनिरहेछु । यो समय अनि यो परिवेश र यो मनलाई कसैले आफ्नो अनुकुल चलाउन नसक्ने रहेछन् । मैले पनि यो मनलाई आफ्नो अनुकुल चलाउन सकिन र त लेखिरहेको छु मनको संवेगहरू ।
समयसँगै यात्रा गर्न सिक्नु पर्दो रहेछ । समयले हामीलाई पर्खने होइन हामी समयसँगै अगाडि बढ्नु पर्ने रहेछ । यही बीचमा कैयौ दिनहरू यस्ता पनि आए जहाँ हामी पूर्णतः बेखबर जस्तै रह्यौ एक अर्काबाट । नबोलेरै बिताइए धेरै दिनहरु, न कुनै फोन, न कुनै सन्देश, सामाजिक सञ्जाल सब्बै सबैबाट बेखबर भइरह्यौ ।
निकै शंकालु मान्छे म र घमण्डी पनि (यस्तै सोँच्दिहौ तिमीले मलाई) । सायद त्यही बानीले गर्दा नै आज हामी एक अर्काबाट निकै टाढा भएका छौँ यो समयमा । म त आफ्नै मर्जीको मान्छे । जता जता खुशी लाग्यो उतै उतै हिँडिदिने । थिएन त्यस्तो पुग्नै पर्ने गन्तव्य, र राखेको छैन अँझै त्यस्तो गन्तव्य पनि । जसरी यो समय चलिरहेको छ त्यसै गरी म पनि चलिरहेको छु । हो यती कि म मेरो खुशीको लागि मात्र नभएर अरुको खुशीको लागि पनि यात्रा गरिरहेको छु । कहिले आमाबुवाको लागि, कहिले साथीहरुको लागि, कहिले यो समाजको लागि, र अहिले यो मनले आफ्नो सोँचेको तिम्रो लागि । आखीर यात्रा नै त रहेछ नि जिन्दगी पनि ।
यो मन पनि अनेक सोँचिरहन्छ । थाहा छ तिमी मेरी होइनौ । तिमी त अर्कैकी मान्छे । तिमी त आफ्नै दुनियाँ, आफ्नै संसार, आफ्नै परिवेशमा रमाइरहेकी मान्छे । अनि म, म पनि त आफ्नै दुनियाँ, आफ्नै संसार, आफ्नै परिवेशमा रमाइरहेको मान्छे । तिमी तिम्रो मान्छेलाई सम्झिएर तिम्रो मान्छेसँगै रमाइरहेकी अनि म मैले आफ्नै सोँचेकी तिम्रो सम्झनामा रमाइरहेको मान्छे । जसरी सम्झिन्छु भनेर सम्झिन सकिन्छ, कहाँ सकिँदो रहेछ र प्यारो मान्छे विर्सिन्छु भनेर विर्सन ।
सम्बन्धहरू भनेको निकै नाजुक हुँदा रहेछन् । कति खेर कसरी छुट्छ थाहै ह्ुँदैन । पहिलो बोल्न छोड्छ, दोस्रोले बोलाउन छोड्छ कारण पहिलोलाई समस्या नहोस भनेर । केही सम्बन्धहरू यसै सकिन्छन । कहीँ पहिलो बोलिरहेको हुन्छ तर दोस्रो बिस्तारै टाढिई दिन्छ । कारण पहिलोलाई समस्या नहोस भनेर । र सम्बन्धहरू सकिन्छन । आखिर दुवै अवस्थामा सम्बन्ध सकिनुको कारण एउटै हो पहिलोलाई समस्या नहोस । तर अवस्था केही फरक छ, हो म दोस्रो तरिकाबाट सम्बन्ध सकिएको/सकाएको मान्छे । मेरो कारणले तिमीलाई त्यस्तो कुनै पनि समस्याहरू नआओस हरेक समयमा यही चाहने मान्छे । यही कारणले म तिमीबाट टाढिएको हुँ बिस्तारै बिस्तारै । निकै सकस परिरह्यो सुरुवाती दिनहरुमा । केही पनि कुरा भुल्छु भनेर भुल्न कहाँ सजिलो हुँदो रहेछ र रु त्यसमा पनि तिमी त मनको मान्छे पो त ।
भुल्छु भनेर भुल्न खोज्नु भनेको झनै बेसी सम्झिनु रहेछ । हरेक समयमा तिमी नै याद आइरहने । अफिस गयो तिमी याद आउने, रेडियो स्टेसन गयो तिमी याद आउने, कतै साथीहरूसँग गयोसँगै तिमी भएको भए जस्तो लागिरहने । केही महिना त यसै गरी बितेका हुन मेरा । यती भनिरहँदा तिमीले यो सोँच्ने भूल कदापि नगर्नु कि अहिले भने याद आउँदैनौ तिमी, कि बिर्सिसकेँ तिमीलाई, अहँ होइन त्यस्तो हुँदै होइन । हरेक पल नियालिरहेको हुन्छु । अँझै बेसी सम्झना बनेर आइदिन्छ्यौ हरेक क्षणमा तिमी ।
जीवन यात्रा हो । हामी यात्री हौँ, हिँड्दै गर्दा यात्रामा उकाली ओरालीहरू आउँछन, भञ्ज्याङ चौतारीहरू आउँछन । उकालीसँगै उक्लीनु पर्छ, ओरालीसँगै ओर्लिनु पर्छ । यो त यात्राले बिना कुनै बिकल्प अघि सारेको चुनौती हो । जसलाई चुपचाप स्वीकार्नु पर्ने बाध्यता सबैलाई हुन्छ । हो त्यस्तै बाध्यता आयो हामी बीचमा पनी, जसको कुनै बिकल्प नै थिएन ।
यात्रा अघि बढिरहँदा दोबाटो अनि चौबाटोहरुलेसँगै हिँडिरहेका यात्रीहरुलाई अलग गराई दिन्छ । दोबाटोमा छुट्टिएका कोही कहीं कतै भेटिन्छन त कोही उसै गरी चौबाटोमा नभेटिन पनि सक्छन । अज्ञात पीडाहरुको भारी बोकेर हिँडिरहेको मान्छे म । निकै पर पुगिसकेको छु । एउटा आफ्नै एक्लोपनको साम्राज्य खडा गर्ने सपना बोकेर । जहाँ म हुँ, मेरा सपना हुन, अनि होस केवल तिम्रा सम्झनाहरू मात्र र सम्पूर्णरुपमा तिमीलाई सम्झिन सकुँ ।
आखिर जिन्दगी भनेको सपना अनि सम्झनाहरुको संग्रह त रहेछ । जहा हजारौं अपुरा चाहनाहरु, अनि पुराना यादहरू जम्मा भएर बस्दा रहेछन् । मैले पनि संगालेको छु निकै यादहरू अनि सम्झनाहरू । त्यति मात्र पनि होइन, मैले संगालेको छु यही जिन्दगी नामको संग्रहमा निकै धेरै माया, तिम्रो लागि अनि संगालेको छु सुन्दर सपनाहरू आफ्नै लागि पनि ।
कसैले भन्थ्यो एउटा केटा र केटी सधैं असल साथी मात्र रहिरहन सक्दैनन, सम्बन्ध अघि बढिरहँदा अनीहरू बीचमा प्रेम नामको टुसा पलाउन थाल्छ अनि राख्छ कोही एउटाले प्रेम प्रस्ताव । जरुरी छैन कि सबैे प्रस्तावहरू स्वीकार्य हुन्छन । केही सम्बन्धहरू यसै बीचमा सकिन्छन । केही सम्बन्धहरुले यसै बीचमा नया“ मोड लिन्छन, अनि कुनै सम्बन्धहरू रहन्छन दोधारमा अलपत्र परेर, जसरी बाटो बिराएका यात्रीहरू रुमल्लिन्छन बाटोमा, जसरी गुड बिर्सिएको चरी उडिरहन्छ यत्रतत्र ।
यस्तै केही भयो हाम्रो सम्बन्धमा पनि । कसैले भनेको त्यही कुरा लागु भयो हामीमा पनि । जब राखियो प्रस्ताव प्रेमको‘ कुनै एकले चाहेको त्यो नयाँ सम्बन्धको सुरुवात स्वीकार्य हुन सकेन दुवैमा र सुरु नहु“दै सकियो त्यो नया“ सम्बन्ध । अलपत्र पर्यो त्यो पुरानो सम्बन्ध, मित्रताको सम्बन्ध । र दोधारमा नै रहिरह्यो ।
म त आफ्नै गतिमा अघि बढिरहको थिएँ । थिएन त्यस्तो कुनै पुग्नै पर्ने गन्तव्य, थिएन हासिल गर्नै पर्ने सफलता पनि । तर पनि थियो एउटा चाहना, थियो अधुरै सपना, थियौ तिमी जसलाई मैलै सजाएर राखेको थिएँ, आफ्नो मानसपटलमा । सम्बन्ध अलपत्र परेपछि धेरै आरोह अबरोहहरू आए, र पनि चलि नै रह्यो यात्रा । तिम्रो साथ बिना, तिम्रो सामिप्यता बिना म रमाउने प्रयास गरिरहेँ । तर कहाँ त्यति सजिलो हु“दो रहेछ र कसैको यादमा रमाइरहन ? यही समयमा आभास भयो कति फरक हुँदो रहेछ, कि कोही हुनु र नहुनुमा ।
यो माया प्रेम भन्ने कुरा आफूलाई परेपछि मात्र थाहा हुन्छ भन्थे, हो रहेछ । जब पर्यो आफैलाई सही नसक्नु भो । याद दिए जस्तो कहाँ सजिलो रहेछ र साथ दिनलाई । मुस्कुराएर बिरोध गर्ने तिम्रो बानिरहेछ, म भने त्यसैलाई प्रेम सम्झिरहेँ । म सम्पूर्ण रुपमा तिम्रो सम्झनामा रमाइरहँदा तिमी भने अरु नै कसैसँग रमाइरहेकिरहिछ्यौ । जब थाहा भयो तिमी मेरो सपनाको संसारबाट टाढा बन्दै छ्यौ, म आफ्नै सपनाको धरातलबाट भा“सिदै गए“ । मेरो सपनाको साम्राज्य ढल्यो त्यसै समयमा । म एक्लिएँ आफैबाट, म टाढिन चाहेँ आफैले सजाएका सपनाहरुबाट । तर यती सजिलो पनि कहाँ हुँदो रहेछ र रु सपना सजाए जस्तो त्यही सपनाहरुबाट टाढिन ।
जबजब तिमी र तिम्रो यादहरुबाट म केही टाढा जान खोज्थें, झनझन तिम्रो यादहरुमा म निथ्रुक्कैसँग भिज्थें । सजिलो भएन बिर्सिएर बस्न जति सजिलो तिम्रो कल्पनामा रमाउन थियो । र पनि रमाए जस्तो गरिरहें जसोतसो तिम्रो अनुपस्थिति मै, तिम्रो आधार बिना नै । निकै सकसका साथ, निक्कै अभावहरुमा, निकै दबाबहरुमा । अभाव थियो तिम्रो सामिप्यताको, तिम्रो साथको, दबाब थियो तिमीलाई मात्र साथीको दर्जामा राख्नु पर्ने । तिमी सोंच्न सक्छ्यौ म कुन अवस्थाबाट गुज्रिएको थिए, कस्तो मोडहरुबाट चिहाइरहेको थिए“ जिन्दगीलाई ।
कसैले भन्यो सम्बन्धमा कहिलेकाहीं आँशु भएन भने त माया गर्नुको मिठास पनि कम हुन्छ । हो त्यस्तै महसुस गरें मैले पनि । आजसम्म आई पुग्दा केही पाएँ, केही गुमाएँ र अँझ भनौँ कैयौं बेसी यादहरू सम्हालें यो समयमा, समग्रमा एउटा निकै यादगार पल बन्यो यो समय मेरो लागि । एउटा सुन्दर मिठास । जुन मिठासहरुमा म तिम्रै आकृतिहरुको परिकल्पना गरिरहें तिम्रो साथको कल्पना गरिरहें ।
कुनै पनि कुरा प्राप्तिभन्दा बेसी पाउन खोज्नु मान्छेको स्वभाव नै हो । र त्यस्तै महत्वाकांक्षी बनेर जिन्दगीलाई विस्तार गर्नुछ मैले पनि । छुट्टिनु पहिले तिमीबाट जुन आत्मियताको अनुभव गरेको थिएँ त्योभन्दा कैयौँ बेशी सामिप्यताको आभास गर्नु छ तिमीलाई सम्झिएर । सपनै सपनाको भारी बोकेर हिँडेका सपनाहरूसँगै अलि पर पुगेर तिम्रो खुशी खोज्ने प्रयास गर्नुछ । रमाउने प्रयास गर्नुछ ।
म केही पर पुगिसकेको छु । र जिन्दगीमा निरन्तर आइरहने अभावको भंगालो पुर्ने प्रयासमा छु । सामिप्यताको अभाव, आत्मियताको अभाव, प्रेमको अभाव, स्पन्दनको अभाव, समग्रमा तिम्रो अभाव ।
म सानो छँदा हजुरआमाले भनेको सुन्थेँ नफल्नुु रहेछ र यतीका धेरै फूल फुलेका । त्यतिबेला म आगन भरी पहेँलै फुलेका आँप र लिचीका बोटहरू हेर्थेँ रमाउँथे । उमेर बढ्दै गयो अनि फेरि कहीँ सुनियो धेरै माया थोरै दिन, थोरै माया धेरै दिन । थोरै बुझे झैँ लाग्यो । यसरी नै समय वित्दै गए । केही सिकीयो, केही बुझियो । को आफ्ना को पराई छुट्टीँदै गए । आफ्नाहरुलाई आफ्नै बनाई राख्न गर्नु पर्ने अनेकन क्रियाकलापहरू सिकियो । केही सिकाए परिवारले, केही गुरुहरुले, केही देखाई भोगाईहरुले, केही कल्पनाहरुले यावत तरिकाले सिकियो । सिक्ने क्रममै मुस्कुराउन सिकियो, कसैलाई दुःख परेको छ भने उसलाई सहयोग गर्न र नसके ऊ सँगसँगै दुःखी हुन पनि सिकियो । अरुलाई सम्झाउन सिकियो । सिक्दै गर्दा र अरुलाई सम्झाउँदै गर्दा आफ्नै मनलाई सम्झाउन भने कसै गरी पनि सकिएन ।
अब त समय पनि निकै अगाडि बढिसकेको छ । अनि तिमी पनि तिम्रो यात्रामा निकै अगाडि पुगिसकेकी छ्रयौ । यात्रा हिँड्दै गर्दा कहीं कतै एक्लोपनको आभास भयो भने फर्किएर हेर्नु, अलीअली झिनो आश, अलिकति निरासा लिएर म यतै कतै बसिरहेको हुनेछु । बोलाउनु आफ्नै सम्झिएर । म पलाउनेछु खडेरीले सुकेको विरुवा वर्षात पछि पलाए जस्तै ।
हिँड्दै गर्दा जिन्दगीको २१ वर्ष पुरा भइसकेछ । अलिकति दुःख अनि धेरै खुशीहरुको बीच आजबाट २२ औँ वर्षको यात्रामा छ्यौ तिमी । र कामना यत्ति कि यो यात्रा कतै नडगमगाओस । नरोकियोस कतै, निरन्तर चलिरहोस उस्तै रफ्तारमा । जसरी चलिरहेको छ अहिले, बरु केही बेसी नै होस यात्राको रफ्तार तर यात्रामा बाधा बनेर नआउन कोही । प्यारो मान्छे तिमीलाई जन्मदिनको शुभकामना ।
जताततै काटामार, मानव् मूल्य सस्तो होला?
मायामा मनको चाहना
भूपि शेरचनको कविता "मैनवत्तीको शिखा"को पद्यवद्धता
मेरो टोलको खबर
तीन मुक्तक (सबै, पिउने, लोभी)
बाल बच्चा देश छोडी
तर मूल्य किन सस्तो?
चाहिन्न त्यो जून-तारा
मायामा फसेका चरी
के माग्छौ परिचय, वेघर दुखी सँग
थोरैमा पनि तिक्खर